Shirkadda TaiG waxay si rasmi ah u bilaabeysaa nooca 2.4.3 ee jeel-jebkeeda | Wararka IPhone
Shirkadda TaiG ayaa ka saartey boodhka beta nooca ugu dambeeyay ee qalab lagu xiro macruufka 8.1.2-8.4. In kasta oo ay mudnaan leedahay waxay umuuqataa inay tahay cusboonaysiin yar, xaqiiqda waxaa jira isticmaaleyaal sheeganaya inay ugu dambeyntii ku guuleysteen inay qalabkooda ku xirxiraan beta beta-ka JAILBIL2.4.3, Sidaas, haddii ay tahay inaad JAILBREAK, waxaa si weyn lagu talinayaa in aad isticmaasho noocaan cusub.
Waxaan xasuusnaa in nuqulkii hore, TaiG Jailbreak 2.4.2 beta horeyba waa loo hagaajiyay nidaamka JAILBREAK waxaana loo malaynayaa in ay saxday dhibaatadii ka hor istaagtay qaar ka mid ah isticmaaleyaashu in ay jabiyaan qalabkooda maxaa yeelay hawshu waxay joogsatay 30% ama 40%. Intaa waxaa sii dheer, beta 2.4.2 sidoo kale waxaa ku jiray Cydia 1.1.23, oo ah noocii ugu dambeeyay ee dukaanka Saurik. Midkii illaa maanta ahaa kii rasmiga ahaa ee ugu dambeeyay, TaiG Jailbreak 2.4.1 ayaa sidoo kale ka hor istaagay geeddi-socodka inuu istaago 60%.
Liiska buuxa ee isbeddelada v2.4.3 waa:
Isku-darka nooca ugu dambeeya ee Cydia 1.1.23
Tayadoodii habka JAILBREAK.
Sidii horeba ahayd kiiska beta, weli waxaa loo heli karaa oo keliya kombiyuutarada leh nidaamka hawlgalka ee Windows. Waxay u muuqataa in TaiG aysan ku jirin cadaadiska aragtida sida PP ay u soo saartay qalabkeeda OS X oo ay sii wadato inay wax qabato, oo ay soo saarto nooc ka dib markii ay u egtahay in qalabkiisu kaamil yahay, waa wax aan wali la gaarin.
Taasi waxay dhahday oo durba muddo dheer kadib markii lasii daayay Jailbreak PP ee Mac, waxaan xaqiijin karnaa in Jeel-jebintu ay tahay ikhtiyaar wanaagsan, arrimaha anshaxa dhinac. Ma jiro cilmibaare xagga amniga ah (sida i0n1c, tusaale ahaan) wax xun oo ku saabsan PP Jailbreak ma uusan dhihin, sidaa darteed waxaan u maleyneynaa inaysan lahayn cilladaha amniga ee halista ah. Intaa waxaa sii dheer, saaxiibkeen Luis Padilla wuxuu horeyba ugu xirnaa qalabka PP wuxuuna dhahaa wuxuu u shaqeeyaa sidii soojiidasho. TaiG ha fiirsato.
1 Soodejiso Qalabka Jailbreak TaiG 2.4.3
2 Casharbarka si aad uhesho JAILBREAK aan looxirin macruufka 8.1.2-8.4
Soodejiso Qalabka Jailbreak TaiG 2.4.3
Casharbarka si aad uhesho JAILBREAK aan looxirin macruufka 8.1.2-8.4
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Jailbreak » TaiG waxay si rasmi ah u sii deyneysaa nooca 2.4.3. Ma jiro calaamadda nooca Mac
Ii oggolaan maayo inaan jallabtiro .. Waxaan khalad ka helayaa markaan furayo TaiG: Darawalka Apple lama helin. Plase soo degso oo ku rakib itunes ... Horey ayaan ugala soo degay iTunes si ay iigu soo diraan boggaas laakiin xitaa iima oggolaanayso inaan sameeyo JAILBREAK, wax xal ah?
Josue waa inaad dhigtaa nooca iTunes-ka 12.0.1 haddii kale waxba ma qaban kartid
Weli waxaa haray 50% ... 🙁